Osama Bin Laden oo nolol lagu sheegay – Edward Snowden | shumis.net
Home » News » Osama Bin Laden oo nolol lagu sheegay – Edward Snowden
Osama Bin Laden oo nolol lagu sheegay – Edward Snowden
Sarkaal horay uga tirsanaa hay’ada sirdoonka Mareykanka ee CIA, Edward Snowden ayaa sheegay in uu hayo cadeyn ku saabsan in Osama bin Laden oo loo filayo in ciidamada mareykanka ay ku dileen Bakistaan sannadkii 2011 uu wali noolyahay oo uu caafimaad qabo
Wareysi uu siiyay the Moscow Tribune, ayuu Snowden sheegay in Osama uu ku noolyahay the Bahamas, sida ka muuqata warqadihiisa mushaharaadka ay siiso CIA. Wuxuu u sheegay Wargeyska “ Waxaan hayaa cadeymo muujinaya in Bin Laden uu wali ku jiro liiska mushaharaadka shaqaalaha CIA. Wali wuxuu helaa in ka badan 100,000 bishii taasi oo loo mariyo account uu ku leeyahay Bankiga Nassua. Ma hubo halka uu haddeer ku suganyahay laakin waxaan hubaa in 2013 uu si wacan ugula noolaa aqal weyn shan dumar ah oo kamid ahaa xaasaskiisa iyo carruur badan oo uu dhalay.
Snowden, oo hadda si magan galyo ah ugu nool dalka Russia ayaa ka soo qaxay waddanka Mareynka kadib markii uu dusiyay keydka sir badan oo ay lahayeen hay’ada sirta Mareynka
Snowden ayaa intaa ku daray in geerida Osama bin laden ay ahayd been abuur masrixiyad ah oo ay sameysay CIA.
Waxa uu xusay Snowden, in Osama si qarsoodi ah loo geeyay goob ku taala Jasiiradda Bahamas isaga iyo qoyskiisa.
Wareysiga uu bixiyay Snowden oo aad xasaasi u ahaa ayuu ku sheegay warar dheeri ah oo ka hadlaya in Osmana bin Laden uu ahaa sarkaal si firfircoon ula shaqeynayay CIA waqti dheer. CIA-da oo kaa shaneysa sirdoonka Bakistaan ayaa qorsheeyay dil been abuur ah ilaa qof kasta uu ka rumeysto in la dilay Osmama bin Laden.
Ma jiro qof raadinaya oo daba jooga waana sahlantahay buu yiri in la qariyo, oo loo raad tiro. Hadduu gadh-ka xiiro oo uu jaakada Militeriga iska tuuro ciddina ma aqoonsaneyso.
Intaas kuma ekeysan ee Snowden waxaa uu xusay in cadeymaha oo dhameystiran uu ku daabici doono buug dhawaan soo baxidoona.
Title: Osama Bin Laden oo nolol lagu sheegay – Edward Snowden
Posted by galmada Net, Published at January 08, 2016 and have 0 comments